Iidola ze-WM-Iidoll zesondo ze-TPE eziyi-100% eyoQobo-uMthengisi osemthethweni
I-Kiana Healthy Skin TPE WM Dolls 156cm B-Cup Amabele amakhulu kunye neempundu ezithandekayo zeModeli yoMzimba woBomi bokwenyani unodoli wesondo
I-Kyla Bristol Blue White Iinwele eziMhlophe ezinoonodoli zeSex TPE B-Cup iiglasi zeOrenji eziOrenji 146CM WM iShirt eSexy iyunifomu
USarai Holly Angel Amaphiko othanda unodoli we-TPE ye-B-indebe emhlophe yomtshato 160CM WM isilingo sasehlathini
UFrankie Field Special Love unodoli C-Cup Ukufudumala kwaseBusika kwe-TPE 159 CM Isimbo seNwele esiPhakathi
UMorgan 153CM Amabele Amakhulu aBuhle boBugcisa be-TPE WM
I-Amari-B yeNdebe ye-172CM e-Waist esinqeni se-TPE Uthando lwe-WM Dolls
I-Dakota-E yeNdebe ye-162CM ye-TPE yokuthanda abantu abadala i-WM Dolls
Thenga iVenkile ekwi-Intanethi kaNodoli weWM
I-WM Dolls ineyona ngqokelela inkulu yoonodoli besini. Ungasoloko ufumana into oyifunayo. Unokufumana konke ukwaneliseka koodoli apha. Uphawu oluphezulu lwe-TPE lwe-sex doll brand ngo-2022 ngoonodoli be-WM. Yeyona idumileyo wm oonodoli bokwenyani brand ehlabathini. Umgangatho weeDolls zeWM ezithengiswayo kwivenkile yethu ngowona ubalaseleyo.
WM unodoli oKhokelayo kwi-TPE uMvelisi weeDoli zeSini
Unodoli we-wm ubonisa i-iconic yegolide ye-factory emithathu, oonodoli be-wm besini banokhetho olungalinganiyo lwemizimba kunye neentloko, wm unodoli wesini yinkokeli kwi TPE iidoli ezintandathu imarike namhlanje. Oonodoli bothando be-wm bamkela inkqubo yemveliso ehambele phambili kunye neyodwa ukwenza ulusu lomphezulu wemodeli lube mpuluswa, luthambile kwaye lunwebeka, ngokuthamba ngokubanzi, ukuqina kunye nemvakalelo yolusu lomntu kunye namava abonakalayo.
Thenga oonodoli beWm abasemthethweni eUrdolls
Oonodoli be-WM bakumgangatho wegolide kwi-TPE (i-thermoplastic elastomer) unodoli wesondo imarike. Ezi zingqinisiso zikadoli we-wm zinokuthatha izifundo zakho zobuqu ziye kwiindawo eziphakamileyo ezivuselela inkanuko. Imodeli nganye yentloko kanodoli we-wm iyilwe ngolonwabo lwakho engqondweni kwaye ibandakanya ulusu oluthambileyo, olufana nobomi lolwaneliseko olongezelelweyo.
Oonodoli bothando bokwenene beWM bayathengiswa
Unodoli we-WM ukhuphe ngokusesikweni umzobo womzimba wokwenyani, obonisa imithambo yegazi, iintunja kunye neempawu zolusu. Kukho iinkcukacha ezininzi zokukunceda ukuba uchonge oonodoli be-WM bokwenyani nababubuxoki kunye noonodoli bothando beWM. Ukuze ukwahlula okwenene kwinkohliso, kwi unodoli omtsha wm ingqokelela, ivenkile ye-urdolls iya kuqhoboshela itshathi yokuthelekisa yokwenene kwiinkcukacha zemveliso nganye. Kwi-urdolls, ungabona unodoli we-cup-h cup wm, ungakhetha wm iwigi kanodoli kunye nentloko kanodoli we-wm kunye namehlo kanodoli we-wm owafunayo.Kukho nesiqu sikanodoli esitshiphu se-wm kunye noonodoli be-wm esitokhweni abalindele ukuba ufumane.
Igama lebrand:Iidola zeWM
Intshayelelo: Izinto ze-WM Doll TPE zinobuhlobo kwindalo esingqongileyo, azinetyhefu kwaye azinabungozi emzimbeni womntu; idityaniswe nenkqubo yayo yokuqhubela phambili kunye neyodwa, ulusu lomphezulu wesondo oluvelisiweyo ligudile kwaye lubuthathaka, luzele luthambe, kwaye luthambile ngathi lolusu lomntu. Umzimba wonke ushushu ngobushushu obungaguquguqukiyo Ubushushu bokwenyani bomzimba womntu kwaye unomsebenzi wokuvula isandi xa uchukumisiwe.
+ Ngaphezulu kweentloko ezingama-200 / ubuso obunokukhetha kubo
+ Amathambo amatsha ngokuzithandela: amalungu aphindaphindiweyo, i-shrug
Wamkelekile ku Thenga i-WM Dolls
I-WM 146cm idoli yesondo
I-WM 150cm idoli yesondo
I-WM 153cm idoli yesondo
I-WM 156cm idoli yesondo
I-WM 157cm idoli yesondo
I-WM 162cm idoli yesondo
I-WM 167cm idoli yesondo
I-WM 170cm idoli yesondo
I-WM 172cm idoli yesondo